Barnaamijyada ugu fiican ee lagu sameeyo wicitaanada fiidiyowga kooxeed | Wararka Gadget
Waxaan sii wadeynaa fulinta talo soo jeedinta ku saabsan codsiyada naga dhigaya kuwo la qaadan karo maalmahan ku xirnaanshaha guriga. Thanks to horumarka tiknoolajiyada iyo shabakadaha bulshada, guryaheena mid walba waxaan ka sameyn karnaa wicitaano fiidiyoow ah oo aan xiriir la sameysan karnaa kuweena. WhatsApp iyo barnaamijyada kale ee fariimaha lagu diro ayaa aad ufududeeyay in lala socdo waxa ku dhacaya qoyskooda iyo asxaabtooda.
Laakiin si xiriirku u noqdo mid dhab ah, wicitaanada fiidiyowga ah waan is arki karnaa oo is maqli karnaa. Wax ina dareensiinaya inyar inyar. Tan iyo markii xaaladda degdegga ah iyo karantiilintu ka bilaabmeen guriga, waxaa jira shirar badan oo lala yeelanayo asxaabta iyo qoyska oo aan joojinnay. Sidaa darteed, wicitaan fiidiyow ah oo kooxeed ayaa ah xalka ugu fiican ee la qabsado, is arag wajiyada midba midka kale oo waqti wacan.
1 Wicitaanada fiidiyowga kooxeed si loo laalo
Wicitaanada fiidiyowga kooxeed si loo laalo
Maantana waanu ku keenay barnaamijyo bilaash ah si aad ula macaamili karto dadkaas aad tabayso. Waxaan sameynay xul yar oo ah kuwa aan ugu helnay sida ugu xiisaha badan, fursadaha ay bixiyaan awgood ama fudeydkooda wax qabadkooda. Hadda cudur daar uma heli doontid taas, guriga, waxaad waqti la qaadan kartaa qoyskaaga ama asxaabtaada.
Marka lagu daro wakhti fiican, codsiyada wicitaanada fiidiyaha kooxda, waxay kaloo yeelan karaan adeegsi xirfadeed. Kulan lala yeesho kooxda shaqada, si loo sii wado shaqada telefonka, tusaale ahaan. Iyo mid kale oo ka mid ah adeegsiga ah in barnaamijyadan la siinayo tan iyo markii la xidhay, waa sii wadida kaqeybgalka (guriga) fasalada isboortiga kooxdeena.
Waa inaan ku bilownaa liiskan talooyinka barnaamijka uu qof walba adeegsado. Sida aan ogsoonahay, WhatsApp muddo kadib ayuu isbeddelay, iyo in muddo ahba waxay na siisay ikhtiyaarka ah wicitaannada fiidiyowga ah. App ah oo aan dhammaanteen aqoon u leenahay mahadsanid isticmaalka maalinlaha ah ee aan ka sameysanno, kaas oo, haddii ay dhacdo aadan ogeyn, aad sidoo kale sameyn karto wicitaano kooxeed.
Waa run in wicitaanada kooxeed ee loo maro WhatsApp waa kuwo xadidan marka loo eego tirada kaqeybgalayaasha firfircoon isla waqtigaas. Waxaan isticmaali karnaa oo keliya wicitaan caadi ah leh ilaa seddex isticmaale oo dheeri ah isku mar. Markaa haddii ay tahay wicitaan leh saddex ama afar qof, isticmaalkeedu waa raaxo, waxaan si fudud u ogaan doonnaa sida loo sameeyo mana u baahnaan doonno inaan rakibno codsi kale.
Waa codsi u gaar ah Google. Xaqiiqdii qaar badan baa isku halleeya rakibay taleefannadooda iyagoo aan ogeyn gudaha barnaamijyada xirmada Google ee horay loo sii rakibay. Loogu qaatay sidii codsi fariin ah shaashad si xishood la’aan ah u doonaysay inay u ekaato WhatsApp laakiin si cad u fashilantay. In kasta oo aysan waligeed gaarin guusha la filayo, Google ayaa sii waday inay ku sii hayso barnaamijyadeeda.
Markan kama hadlayno Hangouts ahaan codsi fariin ahaan, sida iska cad. Mid ka mid ah astaamaha ugu wanaagsan ee ay lahayd, oo wali sii socota, waa wicitaan fiidiyoow ah. Barnaamijkan iyo Adoo adeegsanaya koontooyinkeena Google waxaan la wadaagi karnaa wicitaan fiidiyoow ah ilaa 10 qof isla mar. Awood u lahaanshaha inuu balaariyo ilaa 25 qof haddii aan leenahay koontada isticmaale xirfadle.
Talo bixin kale oo ah waad isticmaali kartaa adigoon rakibin wax codsi ah. Iyo taas oo ah Uma baahnid inaad isdiiwaangeliso ama aad akoon sameysato degel kasta oo cusub. Koontadaada Google waa aqoonsigaaga oo desktop-ka webka laftiisa ayaad toos uga hadli kartaa. Dheeraad ah, Waad ku mahadsan tahay kaabayaasha server-yada ay leedahay, waxay na siisaa dhawaq weyn iyo tayada muuqaalka ee isku xirnaanta.
Hadda waxaan la soconnaa codsi ay iska leedahay Apple. App ah kiiskan ayaa ah horay loogu rakibay dhammaan qalabka Apple. Sidaa darteed, haddii aan isticmaalno iPhone, iPad ama MacBook maahan inaan rakibno wax codsi ah dheeraad ah, ama soo dejiso barnaamij kasta. Sidoo kale, sida Google iyo Hangouts, waxaan ku isticmaali karnaa FaceTime aqoonsikeena Apple iyada oo aan xisaab la abuurin.
Xaaladdan oo kale, sida badan oo ka mid ah codsiyada Apple u gaarka ah, Waxaad u isticmaali kartaa oo keliya qalabka ka socda nidaamka deegaanka ee iOS. Wax si weyn u xaddidaya isticmaalkeeda iyadoo kuxiran nooca aaladda iyo / ama nidaamka hawlgalka ee aan haysano. Laakiin haddii kiisku yimaado, haddii qof kastaa haysto alaab tufaax ah, ilaa 32 kaqeybgalayaashu waxay kubiiri karaan wadahadal keliya isku mar.
Halkan waxaan ka helnaa codsi aad iibsaneyso caan ah oo aad iyo aad u wanaagsan bilihii la soo dhaafay. Taas oo si weyn u qarxisay toddobaadyadan ku xirnaanshaha guriga. App bilaash ah oo kiiskan leh nooc lacag ah oo ballaarinaya suurtagalnimadiisa. Nooca bilaashka ah waxaan ku wici karnaa fiidiyow ilaa 100 kaqeybgalayaal, kaliya taasi waxay kuxirantahay kiiska waxaan yeelan doonaa waqti xadidan.
Nooca lacag bixinta ah ma jiro wax xadidan oo ku saabsan waqtiga isticmaalka, tirada ugu badan ee kaqeybgalayaashuna waa sidiisii. Si aad u isticmaasho waa lagama maarmaan, marka lagu daro soo dejinta iyo rakibida arjiga, samee koonto inaan awoodno inaan isku aqoonsanno qalab kasta. Waxaan helnay sheeko ku saabsan inta ka hartay Barnaamijyada, waana taas Waxaan ku biiri karnaa habka codka adoo wacaya.
Qalab kale oo isgaarsiineed oo loogu talagalay wicitaanada fiidiyowga. Kiiskan, GoToMeeting wuxuu ka dhashay barnaamij kumbuyuutar ah oo markii dambe u booday dukaamada dalabka. Dhalasho ka soo horjeedda barnaamijyada kale ee aan kuu sheegnay, kuwaas oo markii hore loogu talagalay aaladaha mobilada haddana ku jira miisaskeena. GoToMeeting, tan iyo markii la aasaasay, waa si cad diirada loogu saaray shirarka xirfadeed iyo ganacsi, inkasta oo sida oo kale loo isticmaali karo nooc kasta oo wicitaan fiidiyo ah ah.
Waxay leedahay a nooca "bilaashka ah" oo leh xaddidaadyo qaarkood, iyo tirada isticmaaleyaasha ee qayb ka noqon kara wadahadal kasta waxay ku xirnaan doontaa koontada qandaraaslaha uu soo abaabulaha kulanka. Iyada oo leh interface fudud Marka laga hadlayo isticmaalkeeda, way ka raaxo badan tahay in lagu isticmaalo kombiyuutar ama kiniin ka badan kan casriga ah. Si aad uga mid noqoto GoToMeeting-ka desktop waxaad sidoo kale u baahan doontaa inaad abuurto astaan ​​isticmaale. In kastoo Laga soo bilaabo codsiga mobilada, adoo ku daraya Aqoonsiga kulanka laguugu casuumay, waxaad awoodi doontaa inaad u isticmaasho diiwaangelin la'aan hore.
GoToMeinging - Kulamada Fiidiyowga & Kulamada Khadka Tooska ah
La soco cayaaraha ugu fiican ee karantiilka
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Aplicaciones » Barnaamijyada ugufiican ee wicitaanada fiidiyaha kooxda
Samsung ayaa joojin doonta soosaarka shaashadaha LCD-da sanadkan